23 “Usataura mashoko enhema.+ Usabatsirana nomunhu akaipa nokuva chapupu chinoronga kuita zvechisimba.+ 2 Usatevera vanhu vazhinji pakuita zvakaipa;+ uye usapupurira mhosva uchitsigirana nevazhinji kuti mutsaudzire kururamisira.+ 3 Kana ari munhu akaderera, usasarura pamhosva yake.+ 4 “Kana ukasangana nenzombe yomuvengi wako kana kuti mbongoro yake yarasika, chokwadi unofanira kuidzorera kwaari.+ 5 Kana ukaona mbongoro yomunhu anokuvenga yakatsitsirirwa nomutoro wayo, haufaniri kumusiya. Chokwadi unofanira kuisunungura pamwe chete naye.+ 6 “Usatonga mhosva yomumwe wako murombo uchitsaudzira paanokakavadzana nomumwe.+ 7 “Unofanira kugara kure neshoko renhema.+ Usauraya asina mhosva uye akarurama, nokuti handizoti munhu akaipa akarurama.+ 8 “Usagamuchira pfumbamuromo, nokuti pfumbamuromo inopofumadza vanhu vanoona zvakanaka uye inogona kukanganisa mashoko evanhu vakarurama.+ 9 “Musadzvinyirira mutorwa,+ sezvamakaziva manzwiro anoita mweya womutorwa, nokuti makava vatorwa munyika yeIjipiti.+ 10 “Unofanira kudyara mbeu mumunda mako kwemakore matanhatu, ukohwe zvibereko zvawo.+ 11 Asi gore rechinomwe unofanira kuusiya usina kurimwa, unofanira kuuradza,+ uye varombo pavanhu vako vachadya zvinobva mauri; mhuka dzomusango dzichadya zvavanosiya.+ Uite saizvozvowo nomunda wako wemizambiringa nomunda wako wemiorivhi. 12 “Unofanira kuita basa rako mazuva matanhatu;+ asi urege pazuva rechinomwe, kuti nzombe yako nembongoro yako zvizorore uye mwanakomana womurandasikana wako nomutorwa vazorore.+ 13 “Munofanira kuchenjerera zvose zvandakakuudzai;+ uye musataura mazita evamwe vanamwari. Haafaniri kunzwika pamiromo yenyu.+ 14 “Unofanira kundiitira mutambo katatu pagore.+ 15 Uite mutambo wemakeke asina kuviriswa.+ Udye makeke asina kuviriswa+ kwemazuva manomwe, sezvandakakurayira, panguva yakatarwa mumwedzi waAbhibhi,+ nokuti mumwedzi iwoyo wakabuda muIjipiti. Havafaniri kuuya pamberi pangu vasina chinhu.+ 16 Uitewo mutambo wokukohwa michero inotanga kuibva+ yemabasa ako, yezvaunodyara mumunda;+ nomutambo wokuunganidza pakupera kwegore, paunounganidza zvawakashandira kumunda.+ 17 Vanhurume vako vose ngavauye pamberi pechiso chaIshe wechokwadi, Jehovha,+ katatu pagore. 18 “Usapa ropa rechibayiro changu pamwe chete nezvinhu zvakaiswa mbiriso. Mafuta omutambo wangu haafaniri kurara usiku hwose kusvikira mangwanani.+ 19 “Unofanira kuunza zvakanaka kupfuura zvose pazvibereko zvinotanga kuibva zvomunda wako kuimba yaJehovha Mwari wako.+ “Usabika mbudzana nomukaka waamai vayo.+ 20 “Tarira ndiri kutuma ngirozi+ mberi kwako kuti ikuchengete uri mumugwagwa, kuti ikusvitse munzvimbo yandakagadzira.+ 21 Zvichenjerere nokuda kwayo, uteerere inzwi rayo. Musaipandukira, nokuti haingaregereri kudarika kwenyu;+ nokuti zita rangu riri mairi. 22 Asi, kana ukanyatsoteerera inzwi rayo, ukaita zvose zvandichataura,+ ndichaitira vavengi vako utsinye uye ndichanetsa vaya vanokunetsa.+ 23 Nokuti ngirozi yangu ichaenda mberi kwako, ichakusvitsa kuvaAmori nevaHiti nevaPerizi nevaKenani, vaHivhi nevaJebhusi, uye ndichavaparadza.+ 24 Usakotamira vanamwari vavo kana kuti kunyengetedzwa kuti uvashumire, usagadzira chero chinhu chipi zvacho chakaita semabasa avo,+ asi chokwadi uvawisire pasi, uputse shongwe dzavo tsvene.+ 25 Munofanira kushumira Jehovha Mwari wenyu,+ uye achakomborera zvokudya zvenyu nemvura yenyu;+ chokwadi ndichabvisa denda pakati penyu.+ 26 Munyika yako hamuzovi nomukadzi anobva pamuviri kana mukadzi asingabereki.+ Ndichaita kuti mazuva ako akwane.+ 27 “Ndichatuma kutyiwa kwangu mberi kwako,+ ndichavhiringidza vanhu vose vauchasvika kwavari, chokwadi ndichaita kuti vavengi vako vose vakufuratire.+ 28 Ndichatumira kusuruvara mberi kwako,+ uye kuchadzinga vaHivhi, vaKenani, nevaHiti pamberi pako.+ 29 Handizovadzingi pamberi pako negore rimwe, kuti nyika irege kuva dongo, mhuka dzomusango dzikakuwandira.+ 30 Ndichavadzinga pamberi pako zvishoma nezvishoma, kusvikira wabereka, waita kuti nyika yacho ive yako.+ 31 “Ndichaisa muganhu wako kubvira kuGungwa Dzvuku kusvikira kugungwa revaFiristiya uye kubvira kurenje kusvikira kuRwizi;+ nokuti ndichaisa vagari vomunyika yacho muruoko rwako uye chokwadi uchavadzinga pamberi pako.+ 32 Usaita sungano navo kana navanamwari vavo.+ 33 Havafaniri kugara munyika yako, kuti varege kukuita kuti unditadzire. Kana ukashumira vanamwari vavo, zvichava musungo kwauri.”+